Halaaggii Dhacay Looma Kala Harin! – Maandoon
December 5, 2018 Othman Abdirahman
Taarikhdu markay ahayd Isniin 26/11/2018, waxaa goobta uu ka dagnaa xaafadda Baraxley qarax iyo rasaas lagu weeraray Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare, khasaarihii halkaa ka dhashay waxa ku dhintay 30 qof uu ku jiro Abdiwali Sheikh, xaaskiisa, caruurtiisa iyo dad kale oo xertiisa ka mid ah. Abdiwali ayaa ahaa nin sheegta in uu yahay Wali, islamarkaasna halka uu ka dagnaa Baraxley ku soo bandhigi jiray isaga iyo xertiisa heeso iyo xadrooyin ay dhibsadeen qaybo ka mid ah Culimada Somaliyeed.
Horraantii bishii September, 2017kii in Abdiwali Sheikh Ali Elmi iyo xertiisa soo bandhigeen sawir nin lagu magacaabo Biloow Sheikh Husien oo ku sugan Mombasa, Kenya, ka dibna ay ku dul qaadayeen sawirka hees erayadeeda ay ka mid ahaayeen “mina Nabi awlaa min nafsikum awlaa xubi nabii xaqun calaa ahli culaa, yaa ayuhaa ladiina aamanuu saluu wa salimuu calaa muxamadaa” iyo sidoo kale ka mid ahaa “ALahu salama calayhi kiraam ya’maruuna saluu calayhi wa salaam, yaa ayuhaa ladiina aamanuu saluu wa salimuu calaa muxamadaa…u siikum bi taqwa Laahi sarmadaa tasawaduu bihaa bixubi Axmadaa …”.
Waxaa kale Abdiwali muxaadaro uu qabtay sawirka ninka ku sawiran ku sheegay; “Xabiibu Laahi Mohamed salawaatu Laahi wa salaamuhu calayhi wa calaa asxaabi ajmaciin” sidoo kale waxaa ka mid ahaa tilmaamta uu sawirka ka bixiyay “ninkii Ilaahay markii uu nabarahayey markii uu nooga sheegaynayey yiri qad jaa’akum mina Laahi nuuran”
Hoos waxan ku soo qaadanayaa sadex warbixinood oo kalaha waraysi Shiikh Shible, bayaan ay soo saareen Hay’ada Culimada Somaliyadeed uu akhriyay Sheikh Bashir Ahmed Salah iyo Khudbo Jimce uu qabtay Sheikh Mohamed nin la yiraahdo. Mid walba oo warbixinta ka mid a ah waxan soo naqilay sida ay hadalka ay u yiraahdeen sadexda Sheikh aan wax tarjumaad ah lahayn (direct quotation) – si meesha looga saaro in ay dhacdo fasiraad in qof hadal si u yiri si kale aan ahayn looga fasiro.
18 Sept, 2017kii waraysi Sheikh Shible uu siiyay STN TV waxaa lagu waydiiyay su’aal Social Media qof ka soo waydiiyay qof magaciisa lagu soo koobay kaliya ‘saa’il’ waan sidan;
“Shiikha waxaa ii waydiisaa arrin maalmahan lagu soo bandhigayey baraha ay ku kulanto bulshada sida Facebook oo kale, nin shiikh sheeganaya uu soo bandhigay sawir uu ku sheegay in uu yahay Nabigeena Mahamed nabad iyo naxariis dushiisa ha ahaatee ka waran arinkaa maxaa ka jira?”.
Sheikh Shible su’aaasha ka jawaabideeda waxay ku qaadatay qadar shan daqiiqo ah, wuxuna ku jawaabay iyada oo dhamaystiran sidan;
“Dabcan tani iyo shalay ayaa wixii u horeeyay arinkaan I soo gaareen dad baa clips video ah ii soo diray, dan badan kama galin waxaan u qaatay Photoshops-kii dadka laga sameen jiray markay igu soo noq-noqdeen waxaan is iri waxaan salkiisa iyo runtiisa gaar. Ka dib dad badan oo culimada suufiyada area-da Galkacyada ninka dhulka uu joogo nin jirana yahay aabihiina la yaqaano, xitaa culimadii Suufiyada Galkacyo oo ka hadalaya oo ilaa sadex qof aan ka dhagaystay uu ka mid ahaa nin si fiican u hadlay isku magacaabay dalladda culimada Ahla Suniga oo markaa in uu Xamar joogo filayo, sida hadalka u dhacay Xamar ayuu joogay. Marka waxaan rabaa in aan iraahdo marka koowaad waa been abuur. Sawirku Nabi Mohamed ma aha mana noqon karo, sawirka ninka la keenay anigu ma aqaan laakin hadaladaa waxaan ka faa’idaystay aan dhagaysanayey in reer Kenya uu yahay qaarkood in ay sheegeen. Sawirka hadaad si fiican u sii waynayso dadka Sawahiliga yaqaana astaan way ka muuqataa ama Kenya ama Tanzania in uu yahay. Waxaa ku qaran qaybta Carabiga ee saliga hoosteeda, waxaa ku qoran ‘Simba wa Munko’ “Asadu Laahi’, Libaaxii Alle, Simba Libaaxa ayaa la yiraahdaa, Munko Allaah ayaa la yiraahdaa af-Sawahiliga Sheikh Biloow. Ninku, waxaan is iri been abuurka markii laga soot ago, xataa hadduu been abuuranayo ma nin qurux badan ayuu waayey, nin foolxun oo JAREER ah waa Nabigii in la yiraahdo. Ilaahay Subxaana wa tacaalaa qofku markuu been abuuranayo oo meelo Nabiga ka mida ku xag-gudbayo si beentiisa u fashilanto wax meel dhiman ayuu keenaa oo dadku wada gartaan. Maalmahan dad Nabiga sheeganaya waa jiraan Daafoor baa Nabi layga dhigay Abdiwahid la yiraahdo oo Suuratu Dahfor akhrinaya.”
“Mid markii hore nin fiican ahaan jiray oo dacwadu ku jiray oo Tanzania jooga Nabi Ilyas baan ahay lehna waa arkayey oo aan filayo Ramadaankii dhexdiisa miyaa, oo leh Nabi Ilyas baan ahay. Mar walba nin baa jira oo Nabi Ilyas matala Isaguna in aan Nabi Ilyas ahay ayaan ogaaday ayuu leeyahay, in uu dacwad ku dhex jiri jiray clips la ii soo diray ayaa ku ogaaday. Ninkan WAX KALE KAMA AQAAN, waxaa la yaab leh iyo niiko waa ku daray, sawir been ah, oo been ha ahaadee hadana beentu muuqato oo foolxun oo hadana niiko lagu daray, cay iyo aflagaado weeye MAS’ALADU CAFIS MA LAHA KUFRI WEEYE, GAALNIMO WEEYE XUKUNKEEDUNA DIL WEEYE MEESHA LAGU ARKO. Sidaa darteed munaasabadaan waxaan rabaa in aan fariin u diro Maamulada ama Ahlu Suna ha la yiraahdo ama Galmudug ha la yiraahdo ama CID KASTA OO WILAAYAD LEH, ninkaan waa waajib in la soo qabto ninkaan waa waajib in WAAJIBKIISA LA MARIYO.
Maanta Soomaaliya dhexdeeda, mujtamicii Muslimka dhexdooda in sidaa Nabiga loogu tuntay xaqiisa iyo sharaftiisa loo aflagaadeeyo, BANNAANKANA LA ISKA DAAQO WAX DHICI KARA MA AHA. Wax mushatamaca Muslimiinta aqbali karaana ma aha. Ninkaan Maamulada waxaan ka codsanayaan in si deg-deg badan loo soo qabto. Odayaasha qabaa’ilada, odayaasha dariiqadaha iyo culimada maamulooyinka, dariiqada suufiyada, Ahlu Suna iyo Galmudug iyo Xaaf iyo inta la midka ah maamulada Galkacyo Puntland, Somaliland, Garowe haday lacala noqoto, ninkasta oo maamula ninkaa XUKUNKA WAAJIBKA AH QOFKASTA OO MUSLIMA SAARAN WAA IN LA SOO QABTO GEEDKANA LA SOO TAAGO. Ninkaasi waa ka XUNYAHAY SALMAN RUSHDI kuwii Nabiga caynayey kuwa ugu xun ayuu ka mid yahay. Dawlada Federalka HA DHACDO HADAY NINKAA SOO QABAN WAYDO. Hadii talaabo ka qaadi waydo, hadii gudaha Somaliya Nabiga lagu aflagaadeenayo, laga dhiidhin waayo MAAMULKASTANA HA DHACO, IIMAANKANA ALLAHA KA QAADO haday ninkaas oo kale wax ka soo qaban waayaan”.
Bayaanka Hay’ada Culimda Somaliyeed:
19 Sep, 2017kii Hay’adda culumada Somaliyed ayaa Bayaan ay ka soo saareen Sheikh Abdiwali markii ay baaris sameeyeen ka dib (sida ay sheegteen Culimadu). Bayaanka waxaa akhriyey Sheikh Bashir Ahmed Salad, wuxuna u qornaa sidan;
“Culimadu waxay in mudo ah la socdeen wararka la xiriira ninka la yiraahdo Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare oo jooga Galkacyo. Waxaa naga soo gaaarayey Culimada hadalo khatar ah, gefna ku ah diinta Islaamka oo ka mid ahayd laga kor yeelay aysan waajib ku ahayn salaadaha iyo axkaamta diinta Islaamka. Hadana wuxu ku daray in uu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yiraah Biloow Sheikh Husien uuna leeyahay ninkaan waa Nabi Mahamed (saw). Wuxu soo bandhigay iyada oo sawirkaa lagu salinayo lana barakaysanayo. Hadaba Culimada BAARITAAN iyo IS WARAYSI ka dib waxay soo saareen Bayaan;”
1- Culimadu waxay cadaynayaan in ninkaas Abdiwali DIINTA KA BAXAY, waayo wuxuu nabinima siiyay qof aan ahayn Nabi Mohamed (saw) Nabi Mohamed wuxu ku dhashay Maka kuna aasan yahay Madina, qaala Allahu tacaalaa: “ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا”
2- Waxa kale oo Culimadu cadaynayaan in Abdiwali uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii Nabi Mohamed (saw) Ilaahay wuxu leeyahay “ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ” Qaala Laahu tacaalaa “والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم”
3- Waxay Culimadu soo jeedinaysaa ninka l yiraahdo Biloow Sheikh Husien oo ah ninka Sawirka iska leh, in uu si buuxda u cadeeyo mawqifkiisa xiriirka kala dhaxeeya Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare iyo dhamaan macluumaadka la xiriira mawduuca isaga ah
4- Waxaan u mahad celinayaa Maamul Gobaleedka Galmudug oo ka qaatay arinkaan mawqif munaasab ah, waana ku bogaadinaynaa. Waxaan Dawlada dhexe u soo jeedinaynaa in ay ku gacan siiyaan sidii cadaalada loo horkeeni lahaa ninkaan isaga ah
5- Waxaan ku baaqaynaa culimada waxgaradka ah, odayaasha in ay kaalintooda ka qaataan soo afjarida Mashruuca baadiyeelka uu wado Abdiwali ayna markasta ilaaliyaan diinta iyo danaha umadda guud
6- Waxaa ugu baaqaynaa dhamaan dadka uu dhumiyay in ay ka toobadkeenan baadidaas kuna soo noqdaan caqiida Islaamka ah ee muqdaska ah.Wabilaahi Tawfiiq, waxa saxiixay:
1- Sheikh Bashir Ahmed Salad
2- Sheikh Yusuf Ali Aynte
3- Sheekh Abduqadir Sheikh Mohamed Somow”
Khudbadii Jimcaha ee Sheikh Mohamed:
Goor jimce ah taarikhduna tahay 22/09/2017, Shiikh Mohamed oo Iimaan ka ah Masjid ku yaala Xamar waxa uu ka hadlay mawduuca Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare kuna dheeraaday. Khudbada Sheikh Mohamed waxay aad uga hadashay wuxu sheikhu ugu yeeray taarikhda iyo qofka uu yahay Abdiwali Sheikh Ali. Khudbada Sheikha ayaa ahayd mid aad uga hadashay xiriirka ka dhaxeeya Sheikh Abdiwali iyo ninka Biloow Sheikh Husein la yiraahdo oo ahaa sawirka dooda dhaliyey ninka ku sawiran. Khudbada oo aad u dheerayd darteed kana koobnayd; ka taarikhayn Abdiwali, guubaabo iyo kicin shacabka iyo talo soo jeedin dhanka shareecada Islaamka waxa ay ka qabto falka ka dhacay Abdiwali, sida darteed waxan halkan ku qoray qaybta xukunka iyo talo soo jeedinta, waana sidan;
“Qofka Muslimka ah haddii la yiraahdo maalkaaga ayaa la dhacayaa, haddii la yiraahdo ahalkaaga ayaa la dhacayaa ama cirdigaaga ayaa la dulaysanayaa ama maalkaaga ayaa la dhacayaa, wuxu isku dayayaa wasiilo kasta iyo wada kasta in maalkiisa difaacan lahaa, caruurtiisa iyo xaaskiisa bad-baadin lahaa. Laakin Nabigii kaaga xaq badnaa naftaada iyo maalkaaga iyo ahalkaaga hadaadab lisaankaaga kalmad uusan ku lahayn ka waran, HADDAADAN SEEF QAADANAYN AADAN U DAGAALAMAYN ka waran. Haddaadan Lisaankaaga ku difaacayn, haddaadan maalkaaga bixinayn in aad ku difaacdid, maxaa is leedahay Ilaahay agtiisa wax qiima ah intee ku leedahay. Qofkii wax sariixa ah loogu hayo oo cadayn ah laga aqbali mahayo wax ta’wiil ah kaa sariixa ah ayaa lagu qaadayaa. Walaalayaal baaraka Laahu fiikum qadiyada khatarta ah qof walba waxa uu ka dhihi karo iyo waxa uu ka qaban karo ha u istaago. Dadka Muslimiinta ah manaasib iyo awood haysta waajib waxaa ku ah ninkaa isaga ah in ay soo qabtaan Cadaaladana keenaan, oo ay mariyaan sharciga Islaanka wuxuu ka qabo.”
Khudbada Sheikh Mohamed oo dhamaystiran halkan ka dhagayso;
Maxkamadda Koonfurta Gaalkacyo ee Galmudug waxay sheegtay in dembi lagu waayay Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare ka dib markii lagu eedeeyay in uu sawir nin Biloow Sheikh Hussien la yiraahdo leeyahay Nabi Mahamed (scw) ku tilmaamay. Garsooraha Maxkamada, Sheekh Mohamed Mo’allim Ali ayaa BBC-da u sheegay in ninka la eedeeyay oo lagu magacaabo Sheekh Abdiweli Sheikh Ali Elmi Yare uu maxkamadda hor yimid oo su’aalo la waydiiyay, markii dambana la fasaxay. Garsooraha Maxkamada Galmudug wuxu yiri sidan;
“Maalmo dhan baan daba joognay, haddana Sheekha waan wareysanay wuxuuna caddeeyay in arrintaas uu ka bari yahay”.
Ka dib markii aan si dhab ah u dhagaystay erayada heesta – muranka dhalisay ka dibna dilka 30 qof uu ka dhashay – Abdiwali Sheikh Ali Elmi Yare iyo kooxdiisa dhalin yaro u badan ku kor akhrinayaan sawir nin Biloow la yiraahdo ku sawiran yahay. Dhabtii ma ahayn erayo munaasib ku ahaa qof wuxuu doono ha ahaado dhalasho iyo caqiido ha la haadeen in lagu tilmaalmo si toos ah ama si dadban nabi Mohamed (saw). Is bar-bar dhiga sawirka iyo nabi Mohamed (saw) dabcan waa ficil lidi ku ah aaminsanaanta arkaanta diinta Islaamka.
Haddaba, markii aan daraasadeeyay bayaanka Hayada Culimada soo saareen oo Sheikh Bashir Ahmed Salad akhriyay ka koobna 6 qodab waxa arkay in si taxadar leh qodabada Bayaanka ku xusan uga baraadageen marka la feersho xaalka maanta dalka Somalia ku sugan yahay ugana tureen in ay baasiin ku sii qabtaan qarax iyo dilalka loo meeldayin ay gaystaan kuwa shardalayaal sharciga umada dhiigeeda ku banaysteen jeebkooda ku sita.
Qodabada Hay’ada Culimada ay soo saareen waxay isugu jireen cadaymo (Aayado Quran ah) iyo codsi ay kaga codsanayaan Dawlada Federalka iyo Dawalad Gobaleedka Galmudug in Abdiwali maxkamad la horkeeno Culimadu wax sharciya oo dil ah ma ridin.
Dhanka kale waxa Bayaanka Culimada ku dhaliisanahay in aysan u qiilsameen Abdiwali, islamaraasna qodab jideenaya in xaaladiisa caafimaadka loo kuur-galo bayaanka kuma uusan jirin.
Khudbada Sheikh Mohamed Masaajidka ka jeediyay ma ahayn mid miyirka iyo caqliga dadka la hadlaysa waxay la hadlaysay dareenka dadka islamarkaasna isugu jirtay kicin, qiirayn iyo ka taariikhayn Abdiwali qofka uu yahay sida xogta ku hayey. Haddaan qiimeeyay khudbada Sheikh Mohamed ma aha mid saamayn wayn ku yeelan karta xasuuqa 30 qof maadama aysan sharci dil ah marna shiikhu xukumin.
Falka xasuuqa ah 26ka November 2018ka Galkacyo dhanka Galmudug ka dhacay wuxu meesha ka saaray cidda arga-gaxisa ah iyo cida arga-gixisa la dirirka ah, wuxuna goob isugu keenay Alshabab iyo shacabkiii ay xasuuqaysay!!
Haddii xaalku iska ahaado hadba inta la rideeyo iyo inta ka ag dhaw in la gumaado shacabkuna Allahu Akbarta ku cusleeyaan!! Maxay markaa kaga duwan tahay 14kii October 2017 oo 500 qof aagga Soobe, Muqdisho lagu gumaaday, soo kuwaasba mid shiikh ah sida Shible ma rideen ka dibna xukun dil ah kuma ridin kolay cid ismiidaamisa la waayi mayee!!
Soo ma ogid 7.53 billion Aduunka maanta ku nool in qolaba qolada kale gaalo u haysato oo ka diin duwan tahay. Haddaba, haddii qofba qofka ama qoonba qoonka kale uu ka aragti duwan yahay ku duulo in aysan adduunka maalmo kooban gudahood cidiba ku noolaateen. Soomaalina ahaan lahayd kuwa ugu horreeya dhulka laga hoos mariyo illeen Soomaali ayaa adduunka ugu itaal yare.
U adeegsiga Alshabab (Walaayaadka) in ay talaabo ka qaaddo, qof Soomaali ah oo muwaadin ah haduu dambi diiniya iyo mid maadiya galay ay tahay in Xukuumadda Dhexe iyo mida Dawlad Gobaladeedka oo kaashanaya Culimada shareecada yaqaan Dawlada Somaliyeedn ka diiwan-gashan wax ka qabtaan, soo arinka Shible ma aha Somalia Dawladi kama jirto iyo sharciyeen falalka argagixiso ay dalka ka wado. Sidoo kale soo arinku soo ma aha qaraxa iyo dilka Somalia ka socda Adigu ma joogtide qori dab leh ku sii qabo.
dilka ah lagu xasuuqay xero dhan dadkii ku sugnaa ma ahayn mid ka soo baxday fadhi culimo shareecada diinta Islaamka ku takhasustay, dhakhaatir cilmi nafsiga yaqaana iyo sharqiyaano cilmiga maadiga ah.
Xukunka Abdiwali Sheikh Ali in la dilo waxa gooyay Shible kaligiis oo qoru xitaa qalin iyo warqad aan u sidan kuna soo talagalin goobtana ku qabsatay, isla xiligaasna gaaray go’aan masiiriya oo aad khatar u ah kuna halaagmeen 30 qof iyo in badan oo dhaawac ah, isaga oo ka jawabayey su’aal qof uusan aqoon magaciisa lagu soo koobay ‘Saa’il’ uu waydiiyay!!
Shible cidda uu u wakiishay in ay marxuun Abdiwali xukunka dilka ku fuliyaan waxaa ka mid ahaa “Wulaayaadka” – Walaayaadka macnaheedu waa deegaanka maamulka Alshabaab iyo Daacish hoos yimaada !!
Dood u Furan Aqoon-yahanka:
Hadaba Xukunka dilka lagu fuliyay Abdiwali iyo 29ka qof xertiisa ka mid ahaa iyo waddada loo maray waxa ka furan dood xambaarsan su’aalo badan, islamarkaasna ma huraan ah in ay ka qayb qaatan oo caqliga tuujiyaan inta caqliga iyo cilmiga u saaxibka ah.
Su’aalaha loo baahan yahay ummad xeerinaysa aayaha jiritaankeeda iyo nabad ku wada noolaansha mujtamaceeda in ay iswaydiisaa waa;
1- Sharciga Islaamka muxuu ka qabaa falka Abdiwali ku kacay?
2- Hay’ada sharciga shareecada Islaamka cid ku fulin karta maanta Somaliya ma ka jirtaa? Haday jirto Dawlada Somalia ruqsad ma ka haysataa?
3- Abdiwali ma ahaa shakhsi miyirkiisu buuxo? Ma jiri karaan daruufo kale naga dahsoon oo loogu qiil dayi karay marxuunka?
4- Hadday maxkamad Islaamiya oo sharciya jirto asaa Abdiwali ahaa nin miyir qab dambiga ku galay kuna qanacsan ficilka uu sameeyay, wado qaabkee ah ayaa maxkamadu dambigi Abdiwali sharciga u horkeenaysaa?
Su’aalaha kor ku xusun iyo kuwo badan oo la mid noqon kara, haddii aan si qota dheer looga munaaqashoon wax la iska waydiin waxaa god dheer ku dhacaya oo dhumaya jiritaanka ummadeed, daleed iyo dawladeed. Haddaan dood cilmiyeed dhacdadii 26ka November dhacday la galin waxa daw helaya shiikh xag-jir ah oo dal kale daggan, isalamarkaasna fatwo remote control lagu hagayo ku soo raga qof Alle qofkii ka aragti duwan. Waxa si la mid ah taas jidaysmaysa in dadkii Soomaaliyeed ee qadiyadda arga-gixisinimada lagu dilay ay dhamaan ahaayeen kuwo xaq lagu dilay. Maxaa yeelay Alshabaab dadkii ay dileen oo dhan qiil ay dhiiggooda ku bannaysteen bay haystaan.
Waxaan ka cudur-daaranayaa in qoraalku aad u dheeryahay, khasab ayay noqotay in uu dheeraado si loo helo warbixinta inta badan ku hareeraysan dhacdadii foosha xumayd ee lagu xasuuqay dadka maatada ah ee aan is difaaci karin.
Fadlan si hufan aragtidaada uga qayb qaado (xuquuqda qormadana ilaali)
Qore: Othman Mahamud
← Macno-darrada sharka iyo masuuliyadda basharka
Dhaqaale iyo diin: Marx muxuu ku saxnaa? (Qaybta 1-aad) →
Salaadda iyo seetaynta bisadaha
November 3, 2018 Cabdi Ismaaciil Comments Off on Salaadda iyo seetaynta bisadaha
October 17, 2018 Cabdisamed Shire Comments Off on MIYAA UU FASHILMEY INTERNETKU?
I sixra haddaad run sheegaysaan!
September 6, 2018 Cabdi Ismaaciil Comments Off on I sixra haddaad run sheegaysaan!